Azonao atao izao ny misafidy zavatra misy tsindry ao amin'ny Adobe Photoshop CC | Famoronana an-tserasera
Azo alaina izao ny fitaovana fikarohana vaovao iray-tsindry Photoshop CC
Volana vitsivitsy lasa izay dia nihaona izahay fa tsy ho ela dia hampiditra a i Adobe fitaovana fikarohana ho an'ny zavatra misy lanja sy misy fiatraikany lehibe. Ny safidin'ireo zavatra mamela antsika hitahiry ny fotoana rehetra, ka ny fisafidianana faritra iray manontolo amin'ny sary manokana izay tiantsika havaozina amin'ity programa fanta-daza ity dia mety mitaky.
Adobe dia namoaka horonantsary izay naneho an'io fiasa io tao amin'ny Photoshop CC ary izany indrindra efa naterina tao amin'ny Photoshop androany tamin'ny fanombohana ny fitaovana izay mampiasa Adobe Sensei. Ny fitaovana dia antsoina hoe "Select Select" ary tonga miaraka amin'ny andiam-panatsarana hafa ho an'ny Photoshop 19.1
Safidio ny lohahevitra dia miorina amin'ny marchine lerning hanatanterahana asa izay mety mitaky fotoana, toy ny fanapahana ampahany amin'ny sary na fanaovana fanovana amin'ny sary amin'ny fomba haingana kokoa. Ary io fitaovana vaovao io no hahatonga antsika hanadino ny momba ny "lasso", izay nampiasainay hatrany ho an'ity asa ity, izay tafiditra ao amin'ny Photoshop CC farany.
Ao amin'ny horonan-tsary zarain'ny Adobe no ahitanao tsara ny fomba fiasan'ny Select Subject. ihany koan Nanisy fanatsarana vaovao tamin'ny slider fifantenana sy saron-tava, izay ahafahanao mifehy ny habetsaky ny fandotoana mihatra amin'ny sary iray.
Endri-javatra vaovao iray hafa dia ny fahaizana adikao ary apetaho mivantana ny SVG avy amin'ny Photoshop mankany Adobe XD. Azontsika atao ny miresaka momba ny fiasan'ny Microsoft Dial, izay ahafahanao manova ny toeran'ny borosy rehefa mandoko miaraka amin'io fitaovana io.
Farany, ireo izay manana ny fanavaozana ny Windows 10 Creators Edition, afaka misafidy anton-javatra isan-karazany amin'ny UI ianao amin'ny 100% ka hatramin'ny 400%. Zavatra mahaliana ho anao izay manana mpanara-maso manana fanapahan-kevitra 2K na avo kokoa.
Fahatongavana lehibe ao amin'ny Adobe Photoshop izay manamarika ny lasa fianarana milina hamonjy antsika asa mavesatra ary izany dia hatao amin'ny alàlan'ny tsindry iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Azo alaina izao ny fitaovana fikarohana vaovao iray-tsindry Photoshop CC
Simon Escobar dia hoy izy:
"Detection object" ary ohatra amin'izany amin'ny vehivavy
Valiny tamin'i Simón Escobar
Emmanuel Paredes dia hoy izy:
Valiny tamin'i Emmanuel Paredes
Ruben DG dia hoy izy:
Valiny tamin'i Ruben DG
Isa 120 XNUMX no namorona tonelina avana izay mampiseho ny fandehan'ny fotoana